Nkọwa ụlọ ọrụ - SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd. hiwere na 2008.
XY Tower na-ekpuchi mpaghara nke mita 33,000 ma nwee akara mmepụta 10 na-akpaghị aka na ikike mmepụta kwa afọ bụ tọn 30,000. Njikwa nke XY Tower nwere nnukwu ahụmahụ na ụlọ ọrụ eletriki. Enweta ego nke ụlọ ọrụ karịrị 20 nde dollar, ebe ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ ejirila China mee ihe.
XY Tower bụ onye ruru eru nke National Grid, Southern China Power Grid na ọtụtụ ụlọ ọrụ eletriki ndị a ma ama.
XY Tower na-enye ọtụtụ narị ndị ahịa na-agafe mba ahụ ọrụ. Ugbu a XY Tower na-emepe emepe n'ahịa mba ofesi n'ike n'ike. XY Tower na-ezube ịnye ngwaahịa na ọrụ ọkachamara nye ndị ahịa n'ụwa niile. Ndị ọrụ anyị nke XY Tower ekpuchilarị South America, Africa, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia wdg.
XY Tower na-etinye aka na anyị na-enye ndị ahịa anyị ọrụ ọkachamara mgbe niile. Anyị na-atụ anya na imekọ ihe ọnụ na gị.
Akụkọ banyere Corporation
Plantlọ ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọhụụ malitere ịmalite mgbe nke ahụ gasịrị that ikike imepụta kachasị gafere tọn 30,000 kwa afọ
E wuru osisi ohuru ohuru
Mpaghara nke Hop itinye osisi kpaliri karịrị 12,000 m2
Enwetara obodo ahụ ọrụ pụtara ìhè.
Ego mbata kwa afọ gafere 100,000,000 RMB
Ndebanye aha e debara aha ruru 50,000,000RMB, Anyị meriri nkwekọrịta mbụ site na ahịa oversea (Sudan).
Mbupute a na-eme kwa afọ ruru ụlọ elu ruru tọn 10,000
Emeputara ohuru ohuru nke emere na mpaghara nke ohuru dabere n’elu 30,000 m2 ma buru ibu karie na mbu
Sichuan XiangYue tower Co., Ltd. a hụrụ na-elekwasị anya na ígwè ụlọ elu ụlọ ọrụ, wuru ogbako na malitere na-emepụta ike akara ụlọ elu
Trading Company ndibọhọ a mbụ nkwekọrịta nke nnyefe akara elu
Sichuan XiangYue eletriki akụrụngwa trading ụlọ ọrụ a hụrụ Tumadi azụmahịa bụ trading transformer, Gịnị na udọ, akara ngwaike wdg
Onye Ahịa ụlọ